UHans Zimmer Ubonge Isandi seNdawo emva kwesipho esivela kuJony Ive | Iindaba ze-iPhone
UHans Zimmer uncoma umsindo wesithuba emva kwesipho esivela kuJony Ive
UHans Zimmer ngomnye wabaqambi abaziwayo emhlabeni. Iifilimu ezintle zinomculo wazo onjengeNgonyama yeNgonyama, i-Interstellar, i-Gladiator okanye i-Inception. Ebesoloko eqatshelwa ngamabhaso amakhulu omculo kwiminyaka yakutshanje kwaye namhlanje usaqhubeka nokuqamba iifilimu ezifana neDune. Kolunye udliwanondlebe lwakhe lwamva nje, uqinisekisa ukuba owayesakuba ngumyili oyintloko we-Apple, Jony Ive, wamnika ezinye ii-headphones ezingaziwayo ngelo xesha ukumamela umculo ngetekhnoloji yeaudio yendawo kwiinyanga ngaphambi kokusungulwa kwayo. Ngapha koko, uZimmer uyayincoma le teknoloji kwaye uthi uyakonwabela ukumamela umxholo ngayo.
UJony Ive uphinde wavela enika uHans Zimmer ezinye ii-headphones
Udliwano-ndlebe luvela kwi-Apple Music kwaye luqhutywe nguZane Lowe ngu-DJ owaziwayo waseNew Zealand. Uninzi lodliwano-ndlebe lugxile ngakumbi kwikhondo likaHans Zimmer njengomqambi kunye nefuthe lezandi zakhe kuphuhliso lwefilim yehlabathi. Nangona kunjalo, babenexesha lokuthetha malunga neaudio yendawo ka-Apple kunye nezinto ezilungileyo ezimzise ebomini bakhe.
Enyanisweni, waphawula oko phakathi eluvalelweni UJony Ive wamthumelela "ezinye ii-headphones" ngenqaku elithi "Ndiyenzile le nto." Wazinxiba waza waqalisa ukumamela umculo we-spatial audio. UZimmer waqonda ukuba umculo wawudlala ngetekhnoloji yokuntywila kwaye iDolby Atmos inokuhambelana. Kudliwano-ndlebe uye waphawula ukuba akaziphulaphuli iingoma zakhe kuba zisoloko zikwimo ye-stereo.
Ii-AirPods 3 zongeza iaudiyo yendawo kodwa akukho ngxoxo inyukayo
Emva koko, uZimmer wafowunela abahlobo bakhe eDolby wabaxelela into ayifumeneyo kunye namava antywilisayo. Okumangalisayo kukuba, uDolby wathi "ezo headphones azikho, ndicinga ukuba unesibini kuphela." Njengoko egqabaza kudliwano-ndlebe, kubonakala ngathi UJony Ive wamnika iprototype AirPods Max. Nangona kunjalo, ezi headphones zaqaliswa ngoDisemba 2020 kwaye uJony Ive washiya i-Apple ngo-2019. Kuya kuhlala kukho ukungaziwa ukusombulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » UHans Zimmer uncoma umsindo wesithuba emva kwesipho esivela kuJony Ive
I-iPhone 14 kwakhona ngaphandle kwenotshi. Amarhe akayeki
I-AirPods Pro entsha enoyilo olutsha kunye neempawu ziya kufika ekupheleni kuka-2022 ngokutsho kweMing-Chi Kuo